रोचक - Jhilko
भ्याक्सिन बनेपनि कोरोना भाइरस रहिरहने
विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरु भाइरसको भ्याक्सिन बनाउनमा जुटेका छन्, तर यसैबीच वैज्ञानिकहरुका तर्फबाट एउटा रिपोर्ट आएको छ, जसले मानिसहरुलाई झनै सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
जासुसी परेवा फिर्ता गरिदिन मोदीलाई अनुरोध
भारतीय पक्षले उक्त परेवा कश्मीरको सीमापारि जासुसीका लागि पाकिस्तानबाट उडाइएको आशङ्कामा समातेर राखेको छ।
कोरोना भाइरसको औषधि भन्दै विष खुवाएपछि ....
आफुलाई स्वास्थ्यकर्मी बताउने ती महिलाहरुले विक्रमसहित उनका परिवारका ३ सदस्यहरुलाई कोरोनाको औषधि पिलाएका थिए
उनीहरुले क्वरेण्टीन सेन्टरभित्र बनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । साथै समाचारमा पनि यसको चर्चा भइरहेको छ ।
यूएनएफपिएद्वारा आज यहाँ जारी नयाँ प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमा समेत असमर्थ हुने जनाउँदै अगामी महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरुको चपेटामा पर्नसक्ने...
उक्त प्वाल हालसम्म देखिएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिएको थियो। यदि त्यो प्वाल, मानवबस्ती भएको दक्षिण भेगमा सरेको भए त्यसले मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताइएको छ। गत अप्रिल २३ मा कोपर्निकस अर्थ अब्र्जभेसनर...
स्थानीयवासीले सुगा वा उडुवा सर्प भनेर चिन्ने उक्त लहरे सर्प पहिलो पटक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको लरिघाट क्षेत्रमा फेला परेको हो ।
ती व्यक्तिले श्रीमतीलाई बिजनेस मिटिङको बहाना बनाउदै ब्रिटेन पुगेका थिए । ब्रिटेन पुगेका उनी त्यहाँबाट प्रेमिकालाई भेट्न इटाली पुगे । इटाली पुगेका उनी केही दिन प्रेमिकासँगै बसेका थिए ।
केन्यामा हरीयो घासमा पोषक तत्व कमी भएको हुनाले धेरै जनावरमा यो समस्या आउने बताएका छन् ।
एन्थनीले प्रहरीलई दिएको बष्यान अनुसार कोरोनाबारेमा आफुलाई धेरै जानकारी नभएको र यो रोगबारे आफुलाई निकै डर लागेको बताएको थिए । भाइलाई कोरोना भएको थाहा पाएपछि उनले गोली हाने । पैत्रिशियोलाई गोही हानिएको...
नेपालमै छ पाँच बिघामा फैलिएको पेट्रोल खानी, किन भएन उत्खनन् ?
बेलबारी नगरपालिका–८ राधानगर र बाहुनीमा पर्ने यो ठाउँ उद्योग मन्त्रालयको संरक्षणमा छ। ठूलो क्षेत्र ओगटेर राखे पनि सेलले ड्रिल गरेको ठाउँलाई प्लास्टर गरेर सुरक्षित राख्ने कामबाहेक पुनः अन्वेषण र उत्खनन...
कोरोनाबिरुद्ध भगवानलाई मास्क !
भरतको वराणसीको एक मन्दिरमा पुजारीले भगवान शिवलाई मास्क लगाइदिएका छन् । अनि भगवान शिवको मूर्तिलाई नछुन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
मानिसको छालाबाट बनेको उक्त फोटो एल्बम अस्चविट्ज मेमोरियल म्युजियममा राखिएको छ । उक्त म्युजियम पोल्याण्डको निकै पुरानो म्युजियम हो । सोही म्युजियमका कर्मचारीले उक्त फोटो एल्बम बजारमा भेटेका थिए ।
मानिसको पिसावबाट रक्सि आएपछि...
डाक्टरहरुले धेरै पटक महिलाको मुत्र परिक्षण गरेका छन् तर सबै जाँचमा सकरात्मक नतिजा आएका छन् त्यसकारण उनीमाथी शंकास्पद दृष्टिले हेरीएको छ । महिलाको रगत परिक्षण गर्दा कुनै किसिमको रक्सीको असर नदेखिएकाले...
अमेरिकाको मिचिगन निवासी २७ बर्षीया बिथैनी मैक्मिलनको शरिमा यसखाले दुर्लभ अवस्था देखिएको हो । उनको शारिरिक अवस्था देखेर डाक्टरहरु पनि अचम्ममा परेका छन । मेडिकल साईन्सको भाषमा यसलाई युट्रेस डिडेलफि भनिन्छ...
पोलापोलमा र होर्डिङ बोर्डमा एमसीसीबारेमा आकर्षक नारा लेखेपछि सबैको आँखा त्यसतर्फ तानिनेछ । अनि ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्दै यात्रीहरु त्यसैतर्फ आकर्षित हुनेछन् ।
‘के’ र ‘जी’ त भ्रष्टाचारीको नाममा जेल सजाय भोग्ने यसअघिका पात्र हुन । यसमध्ये ‘के’ परमधाम यात्रामा गइसकेका छन् । तर ‘बी’ याने कि बिजय भने नाम अनुसारकै राजनीतिको अनन्त विजय यात्रामा थिए ।
कल्की कोलचिन विवाह नगरी आमा बन्दै !
उनको पहिलो विवाह बलिउड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यपसँग सन् २०११ मा भएको थियो। तर ती दुवैको सम्बन्धमा मतभेद भएपछि २०१५ मा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो। कल्कीका प्रेमी पियानोइस्ट हर्षबर्ग इटलीका हुन्।
विमान अवतरणपछि महिला र बच्चा दुवैलाई कलकत्तास्थित एक निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएनआईले जनाएको छ ।
बालीमा आँखा नलागोस् भन्दै पोर्न स्टारको पोस्टर !
पोस्टरमा लेखिएको छ ‘महासय मलाई देखेर नचिढिउँ ।’ अझ पोस्टरका रूपमा रातो बिकिनीमा सजिएकी सन्नीको तस्बिर छ । हिन्दूस्तान टाइम्ससँग बोल्दै सन्नीका ठूला वक्षस्थलकै कारण आफ्नो खेतमा कमाल हुँदै गइरहेको बताएका...